Teensy- USB ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့လမ်းညွှန် | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Teensy- USB ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့လမ်းညွှန်
ဣဇာက်သည် | 24/05/2022 09:00 | Arduino
ဒီဆောင်းပါးကို ကျွန်တော် လှူပါမယ်။ ဆယ်ကျော်သက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့. Arduino နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော အလွန်စွယ်စုံရဘုတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အရွယ်အစားအရေးပါသည့် ပရောဂျက်များတွင် အပ်နှံနိုင်စေရန် အရွယ်အစားလျှော့ချထားသည်။ ဤနေရာတွင် ၎င်းသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်၊ တည်ရှိနေသော အမျိုးအစားများနှင့် ဗားရှင်းများ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများနှင့် MCU သို့မဟုတ် microcontroller ဖြင့် ဤဘုတ်ကို မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို သင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
1 Teeny ဆိုတာ ဘာလဲ
1.1 Teensy ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
1.2 အမျိုးအစားများနှင့် မည်သည့်နေရာတွင် ဝယ်ယူရမည်နည်း။
2 Teensy နှင့် အခြားအပြားများနှင့် ကွဲပြားစွာ မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။ (လျှောက်လွှာများ)
Teeny ဆိုတာ ဘာလဲ
Teensy သည် PJRC မှဖန်တီးထားသော microcontroller ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်၏အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တွဲဖက်ပိုင်ရှင် Paul Stoffregen ပါ၀င်သော ဒီဇိုင်းဖြင့်။ PJRC သည် ထုတ်လုပ်သူများ၊ DIY၊ တီထွင်ဖန်တီးမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစသည်များအတွက် မတူညီသော စက်ပစ္စည်းများ၏ ဒီဇိုင်နာနှင့် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ဒါကိုလုပ်ဖို့၊ သူတို့ဟာ Arduino ရဲ့ အလားအလာနဲ့ အလွန်စွယ်စုံရတဲ့ ဒီသေးငယ်တဲ့ ဘုတ်ပြားကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ပါဝါနဲ့ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနဲ့အတူ အခြားသော အလားတူ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဘုတ်အဖွဲ့တွေအသုံးပြုတဲ့ AVR တွေအစား ARM-based microcontrollers တွေကိုလည်း အသုံးပြုထားပါတယ်။
Teensy သည် ပန်းကန်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်၊ ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များသို့မဟုတ်ဗားရှင်းများ။အချို့သောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်၎င်းတို့၏အရွယ်အစားကွဲပြားခြားနားသော။ ဤဟာ့ဒ်ဝဲဒီဇိုင်းများအားလုံးသည် I/O စွမ်းရည်များကို မြှင့်တင်ရန် စိတ်ကူးဖြင့် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ချက်များစွာကို ပေးဆောင်ရန်နှင့် Arduino IDE ဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေရန် ဆော့ဖ်ဝဲစာကြည့်တိုက်များစွာမှ ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
ဘုတ်၏ထုတ်လုပ်သူမှပေးဆောင်သောဒေတာစာရွက်များတွင် သင့်မော်ဒယ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဗားရှင်းများကြားတွင် pinout ကွဲပြားမှုများ ရှိနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။ သို့သော်၊ ၎င်းတို့အားလုံးအတွက် ဖြစ်လေ့ရှိသော Teensy ၏ အတန်ငယ်ပိုမိုယေဘုယျအမြင်ရှိရန်၊ ဤအရာအချို့မှာ၊ ၎င်း၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ:
နှင့်သဟဇာတ arduinosoftware နှင့် စာကြည့်တိုက်များ။ ၎င်းတွင် Arduino ဟုခေါ်သော add-on တစ်ခုပါရှိသည်။ teensyduino
App ကို Teensy Loader အသုံးပြုရလွယ်ကူရန်
Linux၊ MacOS နှင့် Windows လည်ပတ်မှုစနစ်များအတွက် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သော ပလပ်ဖောင်းပံ့ပိုးမှု
ဂဟေဆော်ထားသော breadboard pins များပါရှိနိုင်သည်
မင်းမှာ compiler ရှိလား။ WinAVR
နောက်ထပ် နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် ဒေါင်းလုဒ်များ - PJRC တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်
အမျိုးအစားများနှင့် မည်သည့်နေရာတွင် ဝယ်ယူရမည်နည်း။
Teensy ပြားအမျိုးအစားများနှင့် ပတ်သက်၍၎င်းတို့၏၊ နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကျွန်ုပ်တို့တွင် ယခင်အပိုင်း၏ ဘုံဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါကွဲပြားမှုများ ရှိသည်။
Teensy 2.0/Teensy ++ 2.0 နှင့် ကျန်နှစ်ခုအကြား ပထမနှစ်ခုသည် 8-bit နှင့် AVR ကို အခြေခံထားသောကြောင့် ကွဲပြားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဗားရှင်းများသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် 32-bit နှင့် ARM-based ဖြစ်ပြီး အခြားသော တိုးတက်မှုများဖြစ်သည်။
2.0 ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကီးဘုတ်...
MCU: Atmel ATMEGA32U4 နှင့် 8 bit 16 MHz AVR
RAM ကို: 2560 bytes
EEPROM မှတ်ဉာဏ်: 1024 bytes
Flash memory: 32256 bytes
ဒီဂျစ်တယ် I / O: 25 pins, 5v
UART၊ I2C၊ SPI: 1, 1, 1
စြေး: 16 $
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော Teensy 2.0...
MCU: Atmel AT90USB1286 နှင့် 8 bit 16 MHz AVR
RAM ကို: 8192 bytes
EEPROM မှတ်ဉာဏ်: 4096 bytes
Flash memory: 130048 bytes
ဒီဂျစ်တယ် I / O: 46 pins, 5v
စြေး: 24 $
Teensy LC DEV-13305 ဘုတ်အဖွဲ့...
MCU- ARM Cortex-M0+ @ 48MHz
RAM ကို: ၂၇၀၀K
EEPROM မှတ်ဉာဏ်: 128 bytes (emu)
Flash memory: ၂၇၀၀K
ဒီဂျစ်တယ် I / O27 pins၊ 5v၊ 4x DMA ချန်နယ်များ
analog inputs: 13
စြေး: 11,65 $
MCU- 4MHz တွင် ARM Cortex-M72
EEPROM မှတ်ဉာဏ်: ၂၇၀၀K
ဒီဂျစ်တယ် I / O: 34 pins, 5v
စြေး: 19,80 $
Teensy 3.5 (ပင်နံပါတ်မပါ)
MCU:4MHz ARM Cortex-M120 + 32-bit FPU + RNG + ကုဒ်ဝှက်စနစ် အရှိန်မြှင့်စက်
ဒီဂျစ်တယ် I / O: 64 pins, 5v
analog inputs: 27
UART၊ I2C၊ SPI: 0, 3, 3
extras- I2S/TDM အသံ၊ CAN ဘတ်စ်ကား၊ ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် DMA ချန်နယ် 16၊ RTC၊ SDIO 4-bit (SD ကတ်များ)၊ USB 12 Mb/s
စြေး: 24,25 $
Teensy 3.6 (ပင်နံပါတ်မပါ)
MCU:4MHz ARM Cortex-M180 + 32-bit FPU + RNG + ကုဒ်ဝှက်စနစ် အရှိန်မြှင့်စက်
extras- I2S/TDM အသံ၊ CAN ဘတ်စ်ကား၊ ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် DMA ချန်နယ် 16 လိုင်း၊ RTC၊ 4-bit SDIO (SD ကတ်များ)၊ 12 Mb/s USB နှင့် 480 Mb/s USB host
စြေး: 29,25 $
Teensy 4.0 (ပင်နံပါတ်မပါ)
MCU-7MHz တွင် ARM Cortex-M600 + 32-bit FPU + RNG + ကုဒ်ဝှက်ခြင်းအရှိန်မြှင့်စက်
RAM ကို: 1024K (2×512)
EEPROM မှတ်ဉာဏ်: 1K (emu)
ဒီဂျစ်တယ် I / O: 40 pins, 5v
အမှတ်စဉ်၊ I2C၊ SPI: 7, 3, 3
extras- 2x I2S/TDM အော်ဒီယို၊ S/PDIF ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ၊ 3x CAN ဘတ်စ်ကား (1x CAN FD)၊ ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် DMA ချန်နယ် 32 ခု၊ RTC၊ FlexIO ပရိုဂရမ်ထုတ်နိုင်သော၊ USB 480 Mb/s နှင့် USB လက်ခံလက်ခံသူ 480 Mb/s၊ Pixel စီမံဆောင်ရွက်နေသည့် ပိုက်လိုင်း၊ အရံအတားများအတွက် အစပျိုးခြင်းတို့ကို ဖြတ်ကျော်ကာ၊ နှင့် ON/OFF စီမံခန့်ခွဲမှု။
စြေး: 19,95 $
Teensy 4.1 (ပင်နံပါတ်မပါ)
MCU:7MHz ARM Cortex-M600 + 64/32-bit FPU + RNG + ကုဒ်ဝှက်စနစ် အရှိန်မြှင့်စက်
RAM ကိုRAM သို့မဟုတ် flash ချစ်ပ်များအတွက် အပိုတည်နေရာနှစ်ခုပါရှိသော မမ်မိုရီတိုးချဲ့မှုအတွက် 1024K (2×512) နှင့် QSPI
EEPROM မှတ်ဉာဏ်: 4K (emu)
ဒီဂျစ်တယ် I / O: 55 pins, 5v
analog inputs: 18
အမှတ်စဉ်၊ I2C၊ SPI: 8, 3, 3
extras- DP10 PHY ပါရှိသော အီသာနက် 100/83825 Mbit၊ 2x I2S/TDM အသံ၊ S/PDIF ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံ၊ 3x CAN ဘတ်စ်ကား (1x CAN FD)၊ ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက် DMA ချန်နယ် 32 လိုင်း၊ RTC၊ FlexIO ပရိုဂရမ်သွင်းနိုင်သော၊ USB 480 Mb/s နှင့် USB လက်ခံ 480 Mb/s တွင်၊ SD ကတ်များအတွက် 1 SDIO (4 ဘစ်)၊ Pixel Processing Pipeline၊ အရံပစ္စည်းများအတွက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖွင့်ခြင်းနှင့် ON/OFF စီမံခန့်ခွဲမှု။
စြေး: 26,85 $
Teensy 4.1 (ပင်နံပါတ်မပါ) အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Teensy LC DEV-13305 ဘုတ်အဖွဲ့... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
Teensy 4.0 (ပင်နံပါတ်မပါ) အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
ဆယ်ကျော်သက် STMicroelectronics... အင်္ဂါရပ်များကိုကြည့်ပါ ကမ်းလှမ်းမှုကိုကြည့်ပါ
အကောင်းဆုံး	Teensy 4.1 (ပင်နံပါတ်မပါ)
စျေးနှုန်းအရည်အသွေး	Teensy LC DEV-13305 ဘုတ်အဖွဲ့...
ငါတို့အကြိုက်ဆုံး	Teensy 4.0 (ပင်နံပါတ်မပါ)
Teensy နှင့် အခြားအပြားများနှင့် ကွဲပြားစွာ မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း။ (လျှောက်လွှာများ)
Teensy ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့သည် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထုတ်လုပ်သူအများအပြား၏ အလေးအမြတ်ထားဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကအရာများထဲမှတစ်ခုမှာ ဤဘုတ်ပြားအချို့ကို တပ်ဆင်ထားသည့် ချစ်ပ်ပြားနှင့် ဆက်စပ်နေသည်၊ ၎င်းတို့ကို အခြေခံထားသောကြောင့်၊ 32-bit ARM ချစ်ပ်များ. ၎င်းသည် AVR ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးရုံသာမက၊ ၎င်းသည် ARM ကဲ့သို့ ယနေ့ခေတ်တွင် အရေးပါပြီး နေရာအနှံ့အဖြစ် ဗိသုကာပညာတစ်ခုနှင့်လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပိုမိုခေတ်မီသော MCU ကိုရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဖက်ကလည်း အရွယ်အစားသေးငယ်သော်လည်း၊ သူတို့က တော်တော်အစွမ်းထက်တယ်။RAM၊ flash နှင့် EEPROM မမ်မိုရီ၏ ကောင်းမွန်သောစွမ်းရည်များနှင့်အတူ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲအရံအတားများကို အသုံးပြုရန် ချိတ်ဆက်မှု ပင်နံပါတ်များ ကြွယ်ဝပြီး အချို့သော SD ကတ်များ၊ Ethernet စသည်တို့ပါရှိသည်။ Arduino နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော iota ကို မနုတ်ဘဲ၊ ဒါပေမယ့် မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း၊ အဲဒါက "အခြား" မဟုတ်ဘူး၊ ထူးထူးခြားခြားပဲ။
Teensy ၏ နောက်ထပ်ထူးခြားချက်မှာ ၎င်းသည် အခြားအရာများကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ မူရင်း USB ကိရိယာဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ဘုတ်အား အရံတစ်ခုအဖြစ် ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး HID၊ MIDI ကိရိယာ၊ ဂျစ်စတစ်များ၊ gamepad စသည်တို့ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အပိုကုဒ်မပါဘဲ၊ ၎င်းအားလုံးသည် Teensy ဆော့ဖ်ဝဲအစုအဝေး၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းအတွက် သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ Arduino IDE အတွက် addon ဖြစ်သော Teensyduino အတွက်၊ ၎င်းသည် အခြားသော အံ့သြဖွယ် အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ထရန်နှင့် လည်ပတ်ရန် ချက်ခြင်းသာ ကြာပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Arduino » Teensy- USB ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့လမ်းညွှန်
JST ချိတ်ဆက်ကိရိယာ- သင်သိလိုသမျှ